टिप्पणी : एनसेल र आइएनजिओमाथि विप्लव माओवादीको आक्रमणको सन्देश के हुन सक्छ ? - Ratopati
टिप्पणी : एनसेल र आइएनजिओमाथि विप्लव माओवादीको आक्रमणको सन्देश के हुन सक्छ ?
जेठ ३१ | नेत्र पन्थी
काठमाडौं– टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथि यतिबेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादीको आक्रमण र तोडफोड जारी छ । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्ता हिंसापूर्ण काम नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, त्यसको २४ घण्टा नवित्दै पार्टीका महासचिव विप्लवले गृहमन्त्रीलाई चुनौति दिँदै भनेका छन्, ‘हामी तिम्रा जस्तोसुकै र जुनसुकै टावर ध्वस्त पार्ने क्षमता राख्छौँ ।’ गृहमन्त्रीलाई खुला चुनौति, विपक्षी काँग्रेस वा मधेशवादी दलले होइन, अर्धभूमिगत नेता विप्लव आफैले दिनुले गंभीर प्रश्न उठाउँछ ।
गृहमन्त्री बस्नेतलाई विप्लवको चेतावनी : जुनसुकै टावरहरु ध्वस्त पार्ने क्षमता राख्छौं
१० माओवादी घटकवीच एकता भएको अर्कोदिन अर्थात जेठ ७ मा काठमाडौंमा शक्तिप्रर्दशन र जेठ २७ मा नेपाल बन्दसँगै विप्लव नेतृत्वको माओवादीले आफ्ना गतिविधि बढाएको छ । जुन दिन विप्लव माओवादीले नेपाल बन्दको आव्हान गरेको थियो, त्यही दिन एक दैनिक पत्रिकामा भारतीय बामपन्थी पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्माको ‘जनयुद्ध–२ को संकेत’ शीर्षकमा लेख नै छापिएको थियो ।
‘फ्रान्सका महान् बुद्धिजीवी भिक्टर ह्युगोको यस कथनलाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन– दुनियाँको ठूलोभन्दा ठूलो ताकतले त्यस विचारलाई रोक्न सक्दैन, जसको समय भइसकेको छ । र, आज नेपालमा एउटा नयाँ विचारको समय आइसकेको छ, जसले ‘जनयुद्ध–२’ को संकेत गर्दैछ ।’ बर्माको लेखमा थियो । यद्यपी रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बर्माले यसलाई संयोग मात्र भनेका छन् । उनीसँगको अन्तर्वार्ता रातोपाटीमा प्रकाशित हुनेछ । खुलामंचबाट विप्लवले भनेका थिए, ‘हामी चुप लागेर बस्दैनौँ ।’
जेठ ३० मा एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार विप्लव माओवादीले विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका २४ वटा बेस स्टेशनमा क्षति पुर्राएको छ । यसले करीव ५ लाख ५० हजार नागरिकलाई संचारविहीन बनाएको एनसेलनको भनाई छ । यो लगत्तै गृह प्रशासन एक्सनमा आएको छ । कैयौ माओवादीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । सो पार्टी आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइको माग गरेको छ । राज्य र एउटा पार्टीवीचको मतभेद र विवाद बढ्यो भने जटिलता थपिन सक्छन् ।
एनसेल टावरमा आगजनीको आरोपमा विप्लव माओवादीका नेता पक्राउ
एनसेल टावरमा प्रहरी सुरक्षा
एनसेल टावर जलाइएपछि सल्यानका अधिकांश गाविसहरु सञ्चारबिहिन
यसरी अचानक आक्रमणका उत्रनुको पछाडि के कारण हुन सक्छ ? यसलाई राजनीतिक उपस्थिति र सन्देश दुई किसिमले हेर्नुपर्छ ।
एनसेल र आइएनजिओमाथिका आक्रमणवारे विप्लव माओवादीका नेता सन्तोष बुढामगर लेख्छन् : यस कारण एक्सनमा गयौँ
यो पनि विदेशी लगानीका संरचनामा आक्रमण : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक संदेश प्रवाह
यस अर्थमा राजनीतिक उपस्थिति
माओवादी घटकवीच एकतापछि मूल माओवादी प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको छ । यद्यपी एकता नहुँनै पनि यो लेगसी प्रचण्डसँग त थियो नै, त्यही पनि बाबुरामले डिभोर्स गरेर हिडेपछि प्रचण्डमाथि दवाव चाहिँ परेको थियो । प्रचण्डले नेपाली क्रान्तिलाई धोका दिए भनेर प्रचार गरिरहेको बेला प्रचण्डकै नेतृत्वमा माअ‍ोवादीहरुवीचको एकीकरण् विप्लवका लागि त्यति सहज विषय थिएन र छैन पनि । प्रचण्डले माअ‍ोवादीहरुवीचको धुव्रीकरणलाई तेज पार्ने र त्यसमा आफ्नै नेता–कार्यकर्ता समाहित हुने खतरा विप्लवले देखे । यस्तो अबस्थामा ‘राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रमा हामी पनि क्रान्तिकारी धारका माओवादी हौँ’ भन्ने सन्देश दिन विप्लवले आक्रमक र हमलाको नीति अंगीकार गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संसदीय राजनीतिमा नरहेको, अहिले नै सडक आन्दोलनका लागि शक्ति नभएको र एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त अगाडि सारेर शसस्त्र संघर्षका लागि बाटो खुला राखेका विप्लवका लागि सांकेतिक ढंगका हमला र आक्रमण गर्ने सजिलो बाटो बनेको छ । यसैका लागि उनले अहिले सानो स्तरमा भएपनि भएपनि राज्य विरोधी आन्दोलन अगाडि बढाएको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथि भएको हमला तथा आक्रमणले पार्टी र आफ्नो राजनीतिको प्रचार अन्तराष्ट्रिय रुपमा गराउन मद्धत गर्छ भन्ने सजिलो हिसाव विप्लवले नबुझ्ने कुरा नै भएन । र, आजको दिनमा विप्लव प्रचण्डसँग धेरै नै नकरात्मक छन् पनि ।
ठीक यहि बेला प्रचण्डसँग डिभोर्स गरेर निस्केका बाबुरामले नयाँ शक्ति नेपाल घोषणा गरेका छन् । विकास र आर्थिक समृद्धिको नारामा उनले परम्परागत ठाँउबाट निस्केर नयाँ नयाँ शैली र तरिकाले राजनीतिको शुरुवात गरेका छन् । प्रचण्ड माओवादीहरुवीचको एकतासँगै राजनीतिक केन्द्रमा आउने र विकास र आर्थिक समृद्धिको नाराले बाबुराम चर्चामा रहँदा कुनै न कुनै घटनाक्रम विकास गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए विप्लव । प्रचण्ड र बाबुरामका भिन्दा भिन्दै बलिया केन्द्र बन्ने अबस्थामा विप्लवले वैद्यजस्तै हात बाधेर बस्न उचित मानेनन् । यो बलियो मनोविज्ञानबाट विप्लव अगाडि बढेको देखिन्छ ।
मूलत विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोगमा चलेका संघ–संस्था र व्यक्तिहरु अहिले जनयुद्धकालीन मुद्धा व्युताउँने र अड्डा अदालतबाट यस्ता मुद्धाको निरुपण खोज्न चाहेका छन् । विप्लवे उनीहरुलाई पनि सन्देश दिएका छन्, ‘यो कोर्स गलत छ ।’ सेभ दि चिल्डे«न र बल्र्ड भिजनजस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थामा आक्रमण गरेर विप्लव माओवादीले डलरको कारोवार गरिरहेका आइएनजिओलाई सचेत गराएका छन् । विप्लव माओवादीका नेता सन्तोष बुढाको भनाईमा यस्ता कारवाही अरु बढ्न सक्छन् । भन्छन्, ‘जनताले भ्रष्टचारीलाई कारवाहीको माग गरिरहेका छन् । राष्ट्रघाती र अपराधीलाई सरकारले कारवाही गरोस भन्ने चाहीरहेका छन् । सरकारले त्यसो गरेन भने जनकारवाहीको क्रम नरोकिने निश्चित छ ।’ एनसेलका टावरमाथि गरिएका आक्रमणवारे उनको मत छ, ‘नेपाली जनतालाई सुख र सम्बृद्धिको वातावरण बनाउनकै लागि राज्यलाई दबाब दिएका हौँ । कालोबजारी, तस्करी र राज्यको कर नतिरी गरीब जनता लुट्ने कम्पनीलाई सजग गराउन सांकेतिक जनकारवाही गरिएको हो ।’
तर, कहिलेकाही यस्ता ‘कारवाही’ आर्थिक लेनदेन (चन्दा) मा गएर टुंगिएका नजिर छन् । यस अगाडि काठमाडौंमा भएका ‘भ्रष्टचार विरोधी’ नामक ‘कारवाही’ र त्यसपछि गरिएका सम्झौताहरुले गंभीर प्रश्न उठाइदिएको छ । कालोमोसो दल्ने र चन्दा माग्ने काम एकैपटक भएपनि त्यो राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैन । विप्लवले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई यसबाट बचाउन सक्छन वा सक्दैनन् ? यो प्रश्न पनि पेचिलो नै छ । गत बर्ष पनि कालोबजारी गरेको भन्दै ललितपुरमा हिमाल ग्यासको डिपो कब्जा, चितवनमा दुई सय ३० बिघा जग्गा कब्जाको घोषणा, लगानी बोर्डका सिइओ राधेश पन्तको घर घेराउ र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीलाई कालोमोसो दलेर विप्लव माओवादीले चर्चा पनि बटुलेको थियो । तर, यस्ता कारवाही लेनदेनमा टुंगिएको आरोप लाग्यो ।
राजनीतिक पाटो बाहेक यस्ता हमला र आक्रमणका केही सन्देश पनि देखिन्छन् ।
एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्तले राज्यसत्ता विरुद्ध वैधानिक र अवैधानिक दुवै खाले संघर्षको माग गर्दछ । यस्तो अबस्थामा विप्लवले चाहे पनि देशमा अर्को युद्धको शुरुवात गराउन सक्छन् । माओवादीले १० बर्षसम्म चलाएको जनयुद्ध भन्दा उनले फरक शैलीको शसस्त्र संघर्षमाथि नजर लगाएको देखिन्छ र यसैका लागि उनले एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त अगाडि सारेका छन् । एकीकृत सिद्धान्तको ब्यख्यालाई हेर्ने हो भने विप्लवले कुनै दिन युद्ध शुरु गरे भने त्यो न विगतमा जस्तो दीर्धकालीन प्रकृतिको हुनेछ न गाँउबाट शहर घेर्ने रणनीति अनुसारको । बरु सहरीय मध्यम बर्गको समर्थनमा नयाँ शैलीको युद्ध गर्न सकिने सिद्धान्त विप्लवले अगाडि सारेका छन् । नेपालमा अहिले कायम रहेका अन्तरविरोधहरुले त्यो खालको युद्धलाई अगाडि बढने वातवरण दिन्छ वा दिदैन, यो अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । तर, हामीकहाँ अहिले कायम रहेका अन्तरविरोधहरुले कसैले द्धन्द्धल अगाडि बढाए त्यसलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिन्छ । मुख्यत समाजमा बढ्दो धनी र गरीववीचको दूरी र वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवा शक्तिको पलायनले हाम्रो समाजलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ । यी असन्तुष्टि भावनामा बग्न सक्ने बलियो सम्भावना हुन्छ ।
विप्लव माअ‍ोवादीले गत बर्ष १८ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै घेराउसहित ज्ञापनपत्र दिएको थियो । पर्चा वितरण गरेर अख्तियारले कारबाही नगरे आफैँ कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी सो पार्टीले दिएको थियो । भ्रष्टाचारले समाज तहसनहस पारेको, भ्रष्टाचार संस्कृतिका रूपमा मौलाएको, भ्रष्टहरूले देशको राष्ट्रियता नै दाउमा लगाएको भन्दै कारबाही अनिवार्य भएको यो पार्टीको दावी छ ।
आफ्नो कारबाही सूचीमा भ्रष्ट नेता, उद्योगी–व्यापारी, कर्मचारीसहित विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति, देशका प्राकृतिक साधनस्रोत कब्जामा राख्ने तथा भ्याट छल्ने व्यक्तिलाई राखेको पार्टी नेताहरु बताउँछन् । ०४६ पछि आएका प्रतीत–पत्र घोटला, धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चाइना एयर, नेपाल वायुसेवा निगम, माथिल्लो तामाकोसी, कृषि मल, वन फँडानी, डार्फर काण्ड, जनक शिक्षा सामग्री किताब, पशुपति, पेट्रोलियम पदार्थ, अपरकर्णाली, अरुण तेस्रो, मेलम्ची खानेपानीलगायतमा भएका भ्रष्टाचारमाथि आफ्नो चासो रहेको सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । राष्ट्रियताको मुद्धा पनि विप्लवको पार्टीको डकुमेन्टमा प्राथामिकतामा छ ।
एकीकृत क्रान्तिको सैद्धान्तिक जगमा ‘सशस्त्र युद्ध’ मा जाने रोडम्यापसहित वैद्य माओवादीको मुख्यालय बुद्धनगरमा पुगेर ०७१ मंसिर ८ गते विप्लव र खड्कबहादुर विश्वकर्माले सम्बन्ध विच्छेदेको पत्र बुझाएका थिए । विप्लवले आजको दिनसम्म पनि आफ्नो पार्टीलाई अर्धभूमिगत जस्तो राखेका छन् । धेरैजसो केन्द्रीय नेतालाई गाँउ खटाएका छन् । जिल्ला तहका नेतासम्मलाई तालिम दिएका छन् । सैन्य रणनीतिको खोजी गर्न उनले ‘राष्ट्रवादी’ शक्तिसँग पनि संवाद चलाएका छन् । नेपालको राजनीतिलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय समुदाय विभाजित छ । यस्तो बेलामा विद्रोही शक्तिलाई सहयोग र समर्थन हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सिरिया, यमन र क्रिमियको नजिरले यही भनिरहेको छ ।
विप्लवलाई धेरैले एउटा महत्वकांक्षी नेताका रुपमा बुझ्ने गर्दछन् । यही महत्वकांक्षा पूरा गर्न उनले नयाँ प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मतहरु पनि रहने गरेका छन् । प्रचण्डसँग रहँदा स्थायी समिति र वैद्यमा रहँदा सचिव भएका विप्लव आफ्ै कमान्डर छन अहिले पार्टीको छ । राजनीतिक उचाईका हिसावले यो उनको उपलब्धी हो । नयाँ पार्टीको नेतृत्व हातमा लिएसँगै उनले राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसँग भेटघाट गर्ने अवसर पाए । माओवादी आन्दोलनमा क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व आफुले गर्ने सन्देश दिन उनी सफल भए । तर, जे भनेर पार्टी गठन गरेका थिए, त्यो अनुसारको कार्यक्रम नल्याएपछि पार्टी भित्रैबाट उनको आलोचना शुरु भएको थियो । पछिल्ला आक्रमणहरुले विप्लवलाई ‘राहत’ मिलेको हुनुपर्छ पार्टीभित्रबाट ।
पार्टीभित्र विप्लवलाई नेताको अभाव छ, जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा परिचित रहेका होउन । सिद्धान्तमा जति दृढ र कठोर स्वभाव छ र त्यत्तिनै ‘क्रान्तिकारी’ देखिन्छन् । कुशल संगठक र आफुलाई गतिशिल नेतृत्वको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । कार्यकर्तासँग निरन्तर जोडिने र जोखिम मोल्न नडराउने स्वभाव छ । सामान्य जीवनशैली र कार्यकर्तासँगको सहज पहुँच छ । विचार, सिद्धान्त र राजनीतिमा कठोर भनिएपनि विप्लव कार्यकर्तामाझ सरल र मिजाशिला मानिन्छन् । विशेषता सिद्धान्त र व्यवहारवीच तालमेल गराउने प्रयास गर्छन । यी उनका विशेषता मानिन्छन् । यसबाहेक उनका केही कमजोरीवारे पनि चर्चा हुन्छ । अचानक विदेश भ्रमण र अपारदर्शी भेटघाटले उनीमाथि बेला–बेला प्रश्न उठने गरेको छ । राष्ट्रवादीशक्तिको नाममा पूवपंचदेखि सेनाका अवकासप्राप्त अधिकारी र दरवार निकट व्यक्तिहरुसँग पनि भेट गरेको आरोप छ । संघर्ष गर्दा के कसरी अगाडि जानुपर्छ ? युद्धकालमा प्रचण्डसँगै रोल्पा रुकुम बसेका विप्लव पनि जानकार छन् । आजको दिनमा उनको पार्टी आर्थिक रुपमा पनि बलियो ठाँउमा पुगेको छ ।
विप्लव माओवादी र गत असोज ३ मा जारी भएको संविधानवीच पनि लामो दुरी छ । ‘जबर्जस्त नेपाली जनतामाथि लादेको संविधान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, माओवादी र संसदवादी दलबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विरुद्ध छ । यस संविधानले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौताले अस्वीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई नै पुनस्र्थापना गर्ने काम गरेको छ । यो सीधा अग्रगमन, परिवर्तन र जनअधिकारको विरुद्ध छ । यसलाई हाम्रो पार्टी पूर्ण रुपले अस्वीकार गर्दछ ।’ संविधान जारी भएपछि विज्ञप्ती निकालेर विप्लवले भनेका थिए । विप्लवका लागि यो यस्तो सुविधा हो, जसले उनले चाहेको तरिकाले आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्छन् । ‘राजनीतिमा सवै सम्भावना कायम हुन्छन्’ भन्ने गरिन्छ ।